भेरी अस्पतालको व्यथा : बेड संख्या १४२, संक्रमित २९२
नेपालगन्ज — बाँकेमा फैलिएको कोरोना महामारीप्रति प्रदेश र संघीय सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका छन् । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको ठूलो पंक्ति नै संक्रमित भएपछि मेडिकल टिम माग गरिए पनि नपठाइएको उनीहरूले बताए ।
अन्य बिरामी भएको भए एउटै नर्सिङ स्टाफले १५/२० जनासम्म बिरामी हेर्न सक्छन् । तर कोभिडका बिरामी संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरूलाई अक्सिजन दिइरहनुपर्छ । सुईबाट औषधि दिनुपर्छ । ‘ज्वरो मापनदेखि अक्सिजन लेभलसम्म निगरानी गरिरहनुपर्छ,’ नर्सिङ अधिकृत शर्माले भनिन् । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले कोभिड वार्डको क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी बिरामी भर्ना भएपछि थेग्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । ‘कोभिड वार्ड १ सय ४२ बेडको छ । तर, क्रिटिकल बिरामी आएपछि बेड थपेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘स्थिति भयावह भइसक्यो । संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीले आराम गर्न पाएका छैनन् । बिरामीको सेवामै छन् ।’
अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचारमा खटिएका ८ चिकित्सकसहित ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आफै सक्रमित भएका छन् । उनीहरूले नै संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् । कोरोनाको महामारीले भयावह स्थिति उत्पन्न भइसक्दा पनि चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मी नथपिएका कारण अस्पताल प्रशासनले चाहेर पनि सेवा दिन सकिरहेको छैन ।
जटिल अवस्थाका संक्रमितबाहेकलाई अस्पतालले भर्ना गर्न छाडेको छ । भेरी अस्पतालको कोभिड आइसोलेसन बिरामीले भरिएको छ । अस्पतालमा २ सय ९२ जना संक्रमित भर्ना गरिएको छ । इमर्जेन्सी कक्षमा बेड पर्खिनेको संख्या उत्तिकै छ । गम्भीर बिरामीले पनि पालो पाउन कुनै बिरामी डिस्चार्ज हुनुपर्छ या त कसैको मृत्यु कुर्नुपर्छ ।
अस्पतालका कोरोना स्रोतव्यक्ति तथा फिजिसियन डा. संकेत रिसालका अनुसार मेडिकल अधिकृतमा दुइटा मात्रै दरखास्त परेको छ । ‘हामीलाई मुख्य कुरा डाक्टर चाहिएको थियो । मुख्य पदमा नै दरखास्त परेन,’ उनले भने, ‘यो महामारीको समयमा दुई महिनाको करारमा बोलाएर हुँदैन । प्रोत्साहन र स्थायी पद्धति विकास गर्न जरुरी छ ।’
जुम्लाबाट २२ स्वास्थ्यकर्मी आइपुगे
भेरी अस्पतालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट तीन जना चिकित्सकसहित २२ स्वास्थ्यकर्मी आइतबार आइपुगेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक मानबहादुर नेपालीले सोमबारबाट उनीहरूले अस्पतालका बिरामीको सेवा गर्ने बताए ।